नयाँ वर्षको अवसरमा मरिष्का र शंकर अभिनित हिन्दी गीत ‘हर लम्हा’ सार्वजनिक ! हेर्नुहोस् भिडियो - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
नयाँ वर्षको अवसरमा मरिष्का र शंकर अभिनित हिन्दी गीत ‘हर लम्हा’ सार्वजनिक ! हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाडौं । थोरै चलचित्र र म्यूजिक भिडियोमा काम गरेर पनि धेरै चर्चा पाउने अभिनेत्रीको रुपमा स्थापित मरिष्का पोखरेल र लामो समय नेपाली गीत संगीतमा योगदान पू¥याउँदै आएका शंकर लामिछाने अभिनीत हिन्दी गीत ‘हर लम्हा’ को म्यूजिक भिडियो सार्बजनिक भएको छ ।
नायिका मरिष्का पोखरेल फिल्मसँगै म्युजिक भिडियोको अभिनयमा पनि व्यस्त छिन् । केही म्युजिक भिडियो तथा आधा दर्जन नेपाली फिल्ममा मात्र अभिनय गरेकी अभिनेत्री मरिष्काको कामले निकै चर्चा पाउने गरेको छ । त्यस्तै तथा शंकर पनि लामो समयदेखी नेपाली सांगीतिक क्षेत्र र चलचित्र क्षेत्रमा संघर्ष गरीरहेका छन् ।
नयाँ बर्ष २०१९ को अवसर पारेर हन्दी गीत ‘हर लम्हा’को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ।
स्वयं लामिछानेको शब्द ,संगीत रहेको उक्त गीतमा भारतका पाशर्व गायक निलेश सिंह र सहेवाको आवाजमा रहेको ‘हर लम्हा’ गीतमा गायक तथा नायक शंकर लामिछाने र नेपाली चर्चित नायिका मरिस्का पोखरेलको दमदार अभिनय देख्न सकिन्छ।
कुस्माज़ इंटरटेनमेंटको प्रस्तुति रहेको उक्त भिडियोलाई नेत्र गुरुङ्ग ले निर्देशन, मिलन शंकरको छायांकन गरेका छन् । भने सम्पादन नेत्र गुरुङ्गले नै गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा अभिनेत्री मरिष्काले अभिनय गरेका लोकदोहोरी गीत ‘सालको पातको टपरी’ जनमानसमा मन पराइएको छ ।